बिरालोको घाँटीमा घण्टी « Drishti News
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले नेकपाको सरकार बनेपछि भ्रष्टाचार कम भएको सूचक सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री सबैले त्यही सूचकको विज्ञापन गरेर आनन्द लिएका छन् । यथार्थमा, सर्वसाधारण जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि सर्वसाधारण जनता सरकारी निकायबाट पीडित छन् । मोटरसाइकलको लाइसेन्स नवीकरण गराउनेदेखि नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि आवश्यक कागजात जुटाउनसमेत घुस ख्वाउनुपर्ने अवस्था छ । तिनै तहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता सत्तामा छन् । कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता नै सत्तामा भएपछि घुस ख्वाउनुपर्ने प्रथा अन्त्य हुनुपर्ने हो । गरिब, किसान, दलित परिवारका काम त झन् फटाफट हुनुपर्ने हो । नेकपाको भोट बैंककै जनताले सामान्य कामका लागि घुस ख्वाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा कस्तो पर्ला भन्नेतिर कसैले सोचेको देखिन्न । यसो हुनुको कारण तल्लो तहमा चुनाव जितेर आउने अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्ट भएर हो ।
अर्को कुरा, ठूलाठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततामा राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र पनि जोडिएको छ । अख्तियारले पक्राउ गर्न नसकोस् भनेर कर्मचारीले निर्णयको भाषा मिलाउनेदेखि कानूनको भाषा मिलाउनेसम्मको काम गर्दै आएका छन् । नेपालमा कर्मचारी मात्र इमान्दार हुने हो भने राजनीतिक व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्नै सक्दैन । राजनीतिक व्यक्तिले कानूनको भाषा बुझ्दैन । सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि केही कमाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता बोके पनि कसरी कमाउने भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा हुँदैन । त्यस्ता राजनीतिक व्यक्तिको कमजोरी पत्ता लगाएर मन्त्रीहरुलाई घुस खान कर्मचारीले नै सिकाउने गरेका छन् । मन्त्रीका टेबुलमा पुगेका हरेक फाइलमा मन्त्रीले कस्तो टिप्पणी उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा ती कर्मचारीले नै सिकाउने गरेका छन् । तीसौँ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका कर्मचारीहरुले यसैगरी तीसौँ वर्ष सत्ता र शक्तिको आडमा भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् । यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीहरुको सरकारको माथिल्लो तह र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभित्रैका कर्मचारीहरुसँग साँठगाँठ हुन्छ, त्यसैले हुँदा हत्तपत्त यी भ्रष्टाचारीहरु पक्राउ पर्दैनन् । पक्राउ को पर्छ भन्दा घुस सेटिङमा अर्बौ लिएर ठेक्का दिने कर्मचारी होइन, भुक्तानी दिँदा दश, पन्ध्र प्रतिशत कमिशन माग्ने कर्मचारीहरु पक्राउ पर्ने गरेका छन् । जसलाई अख्तियारकै भाषामा भूरा माछा भन्ने गरिएको छ ।
बेलाबखत ठूला माछाको चर्चा पनि हुने गर्छ । ठूला माछा पक्राउ गर्न नसकेकोमा अख्तियारको आलोचना पनि हुने गरेको छ । यो स्वभाविक हो । जबसम्म ठूला माछा पक्राउ पर्दैनन्, तबसम्म देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । ठूला ठूला ठेक्कापट्टा नै ठूला माछाको आहारा हो । स्थानीय तहमा एक हजारबाट घुसको दररेट तय हुन्छ भने, त्यसको मात्रा जिल्ला, प्रदेशमा पुग्दा लाख पुग्छ । तर, ठूलाठूला सेटिङमा हुने भ्रष्टाचारमा करोड होइन, अर्बौ कमिशन आउँछ । यसरी गरिने भ्रष्टाचारलाई सबैले बुझ्ने भाषामा नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार मन्त्रिपरिषद् अर्थात् क्याविनेट निर्णयबाट हुन्छ । क्याविनेट निर्णयबाट हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि अख्तियारलाई कारवाही गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले अख्तियार ठूला माछा देखे भने उल्टै डराएर भाग्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा सुधार नभई नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसद्मा बोल्दै आफ्नो सम्पत्तिमाथि सरकारले छानबिन गर्न माग गरे । यो चानचुने कुरा होइन । डा. भट्टराईले हिजोसम्म कार्यकर्ताले दिएको जडौरी लुगा लगाउने, तिनै कार्यकर्ताको घर डेरामा ‘सेल्टर’ लिएर बस्ने हामी आज देशका प्रधानमन्त्रीसम्म भयौँ । पदको दुरुपयोग गरेर अर्बौको सम्पत्ति जोड्यौँ । त्यसको वैधानिक स्रोत के हो ? डा. भट्टराईको प्रश्न देशका प्रधानमन्त्रीमाथि मात्रै होइन, ०४८ सालदेखि अहिलेसम्म पटक पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भएका हरेक पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको अपारदर्शी जीवनसँग गाँसिएको छ । डा. भट्टराईले संसद्मै यति महत्व कुरा त उठाउनुभयो, अब समस्या बिरालाको घाँटीमा घण्टी कसले झुण्ड्याउने भन्ने नै हो । यो कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीले नै आँट गर्नुपर्छ । ओली त्यो आँट भएका प्रधानमन्त्री पनि हुन् ।
कोरोनाको डढेलोबाट बचौँ
शम्भु श्रेष्ठ काठमाडौं, १४ चैत । कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनको उहान सहरमा गत ३ फागुनको
– रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार) कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का अगाडि आज सारा विश्व निरीह बनेको
शम्भु श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर फर्किएको भोलिपल्टै बिना ‘मास्क’
डा. दीपेश केसी बादल जतिसुकै कालो भएपनि चाँदीको घेरा हुन्छ । चुनौतीहरुले अवसर पनि बोकेको